mhando 0.5.0 – kutsigira
Kurume 24, 2010 kubudikidza chipo 7 Comments
Nhasi tine asunungurwa v0.5.0 inova hwakanyatsorwisa chikuru kuchinja kuti plugin sezvo rinopa zvinhu zviviri kuti vakanga akumbira nevakawanda.
Wokutanga ndiye kwebasa rinofanira negadziriro yeparutivi basa mukati plugin. Unogona kusarudza kana manually kutsigira kukwira, ane negadziriro yeparutivi zvawaitirwa zuva nezuva kana kubvumira negadziriro yeparutivi zviitike mhenyu. Negadziriro yeparutivi ari chete kuitwa shanduro dzevanhu, uye mhenyu ndipo pachinobatsirawo muoti, ari plugin kungotaura anotumira shanduro itsva kuti negadziriro yeparutivi basa.
Izvi negadziriro yeparutivi basa anomhanya pamusoro google appengine kwezvivako, saka yayo zvikuru kutsanya uye scalable.
Chechipiri cheshanduro ndiyo vakawanda kududzira chivako, zvino waibatanidzwa transposh pazviruva peji. Unogona chete yakarova “Translate All Now” bhatani uye ose peji uye pambiru achapiwa kushandurwa kwamuri, zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo. Cherechedza kuti shanduro kunoitwa kurutivi nemhosva, uye kwete Server divi uye latency zvakakwana saka hapana kutya Server kwako kushandisa zvisizvo zvoga basa rokushandura.
Rakatevera Releases kurutivi 0.6.0 Shanduro ichanyanya zvakawanda pamusoro mushandisi (muturikiri) ruzivo uye multi-lingual Blog wrtiting integrations.
pfungwa dzenyu nguva dzose aigamuchira, chete kupindura pano kana kuenda trac.transposh.org.
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: negadziriro yeparutivi basa, kudzora centre, rusununguko, trac, Wordpress plugin
Kurume 31, 2010 pa 11:53 ndiri
Mhoro, tiri kushandisa plugin yedu yepaIndaneti uye vari kufara chaizvo pasi zvabuda. Asi tinoda kupa vaenzi vedu mukana kushandura uye kuona nzvimbo mumutauro Scots uye kunetseka kana izvi zvichiita uye chii kuomerwa nokuwedzera mutauro yokuwedzera?
Chero rubatsiro / inofambiswa chinonyanya anoongwa. Tinotenda kuti plugin huru 🙂
Kurume 31, 2010 pa 1:40 pm
Imi chete vanofanira kuwedzera imwe mutsetse kuti mitauro mumitsetse ari constants faira, rombo rakanaka
Chikumi 18, 2010 pa 3:38 pm
Tinotenda kuti Info uye tsitsi mushakabvu mhinduro.
Ndinokupa munhu zvinofambidzana uye muzive Ndine sei pamusoro payo. Thanks zvakare, vachiri shasha plugin 😉
Kubvumbi 1, 2010 pa 4:36 pm
Very zvakanaka 🙂 One mamwe basa, anogona Iwe wedzera kupinda mazita, mimwe identifers zvemitauro… handizive… nekuti muna Google webmastertools kuratidza shoko iri:
Vasisina rokuremekedza Tags 0
Mufananidzo rokuremekedza Tags 1,139
Long rokuremekedza Tags 0
Short rokuremekedza Tags 0
Non-zvakwo rokuti Tags 0
Mufananidzo rokuremekedza Tags ndiro dambudziko diki, asi dambudziko 🙂
Kubvumbi 16, 2010 pa 6:13 pm
Anogona mutariri kupindura yangu mashoko? 🙂
Kubvumbi 16, 2010 pa 7:23 pm
Title Tags uye Meta Tags akashandurwa, kunyange vasina frontend inowanikwa, ichi chiri ashanda. For ikozvino – kukurumidza nzira kuti ichi wakaiswa ndiko kuisa chinyorwa yaunoshandisa ari mazita zvapo pabango (kunyange private mumwe) uye regai shanduro injini kugadzira ichi.
Daniel True anoti
Kubvumbi 4, 2010 pa 4:54 pm
Zvose kushanda hwakanaka azvino shanduro (v.5).
Dai I pfungwa mushanduri nokuda Urdu uye Punjabi ? Ndine vacho muPakistan uye ivo vakakumbira avo. Most muPakistan uyewo vamwe kuIndia vanotaura mitauro iyi miviri.
Ndatenda; kuramba basa rakanaka!